Teemall/Iziko lezemidlalo/Grandview Plaza/Guangzhou East Railway Station/Zoo/Xiaomanyo Canton Tower/Huacheng Plaza•Shuang Metro Uthutho olululo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLila
ULila unezimvo eziyi-110 zezinye iindawo.
Wamkelekile eGuangzhou, isixeko esihle saseYangcheng. Ndinqwenela ukonwaba eGuangzhou kwaye uhlale ngokukhululeka! Udade umnini kaThixo Cuizi i efudumeleyo, Xicanton enembeko ezizizo ngubani na nobuchule Mandarin. Yena wayeyazi Guangzhou ukutya, ukuthuthwa, kunye nokuzonwabisa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga zokuhamba nezokuhlala, yena ngomonde uya kuphendula wena ~ ^ _ ^
Ikhaya likaDade Cuizi liyinhlanganisela yemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nephuzi, elula kunye nesisa, enemibala ebomvu kunye neentyantyambo ezipinki kunye nezityalo eziluhlaza, ukunika abantu imvakalelo efudumeleyo nekhululekile. Uhleli esitulweni sika tatami efestileni, uphunga iti, utya amashwamshwam, ukonwabela ubuhle bendawo engaphandle kwefestile, unokubona iGuangzhou Tower, isakhiwo se-IFC mgama, kunye neTeemall, Victoria Square kunye neSofitel Sanfon zikufuphi. Panorama yehotele. Ibhedi enkulu ye-1.8 yeemitha ikuvumela ukuba ususe umsebenzi onzima wosuku kwaye ujabulele ukulala ubusuku obuhle kwindawo eyahlukileyo.
Ukongeza, kukho iitawuli ezinomoya, iibrashi zamazinyo kunye nezinye izinto zangasese kwigumbi lokulala, ezibonelelwa simahla. Kukwakho neekhabhathi zokubulala iintsholongwane zempahla kunye neekhabhathi zokubulala iintsholongwane zetafile, iiTV zeLCD ezixhonywe eludongeni kunye ne-100M yeWi-Fi yasimahla. Kukho indlu yangasese eyahlukileyo kwigumbi! Amanzi ashushu iiyure ezingama-24 anele.Ukuba ufuna ukupheka, izitya zasekhitshini kunye nezinongo zibonelelwa simahla.Yiza uzokubonisa ubuchule bakho bokupheka~^_^
Ikhaya likaCuizi licoceke kakhulu kwaye linezothutho ezilulungeleyo.Ibekwe kweyona ndawo isembindini waseGuangzhou.Kukho oonogada kunye nabalindi abangenayo ukungena nokuphuma kwigumbi, kwaye ukungena kuqinisekisiwe! Ixhotyiswe ngendlu yangasese eyahlukileyo, isethi epheleleyo yezixhobo zombane kunye nezixhobo zasekhitshini.
Ikhaya likaDade Cuizi likufuphi ne-Dongfeng Park kwi-Guangzhou Avenue, elungele kakhulu abahlobo abathanda imisebenzi yangaphandle kunye nemithambo yokubaleka! Ielevators ezisuka kwamanye amazwe zifakwe kwisakhiwo, kwaye iipaseji zicocekile kwaye zicocekile. Ulawulo lwepropathi lukhuselekile kwaye lucwangciswe ngocwangco, kunye neepatroli zokhuseleko lweeyure ezingama-24, kwaye abahambi ngeenyawo kufuneka baswayiphe ikhadi lofikelelo ukwenza ukuhlala kwakho kukhuselekile kwaye kukhuselekile. Indawo ejikelezileyo inamaziko apheleleyo, amaziko okutya apheleleyo, kunye nevenkile ekwiyure ezingama-24 yeFamily Mart isezantsi nje. Amaziko emali aquka iBhanki yoLwakhiwo lwaseChina, iBhanki yezoLimo, iBhanki yezoShishino kunye neyoRhwebo, iBhanki yaseTshayina, njl njl. Umboneleli wenkonzo yezonyango osondeleyo kwiSibhedlele seSithili saseBaiyun.
Undwendwe lunokuqhagamshelana nam ngefowuni okanye ngeSMS okanye nge-imeyile kum